Taariikh Ciyaareedka Adre Ayew - BBC Somali
Waa in waxbadan la sameeyaa si loola qabsado dhibaatada horyaalka Ingiriiska ee Premier league, laakiin ciyaaryahanka u dhashay Ghana ee Andre Ayew ayaa aragtidaasi ka dhigay mid aan socon
Karin asigoo isla markii uu gaaray la tagay hab aad u sareeya oo la jaanqaadi kara horyaalkaasi.
Maalintii furitaanka ee xilli ciyaareedka sanadkan, weeraryahanka dhexda ka ciyaara waxa uu gool ka dhaliyay Chelsea oo ku sugan gurigeeda ee Stamford Bridge, iyadoo kooxdiisa Swansea ay kooxda difaacaneysa horyaalka ay la gaartay barbardhac 2-2 ah.
Goolkiisii labaad waxa uu dhaliyay ciyaartii xigtay oo karoonka Swansea ay ku martigeliyeen Manchester United oo ay uga badiyeen 2-1.
25 sano jirkan ayaa goolka barbardhaca dhaliyay asigoo0 dhanka gadaale ka soo orday ayuuna madaxa ku dhaliyay, kahor inta uusan goolka ay ku badiyeen u basin Gomis.
Ciyaaryahanka leh xirfad kubadeed oo uu ku dhashay, bishii august waxa uu ku guuleystay laacibka ugu fiican ee Premier League ee bishaasi, waxaana loo arkay inuu yahay saxiixii ugu wanaagsanaa sanadkan ee horyaalkaasi.
Waxaa lama filaan ahayd in Swansea ay soo qaadatay asigoo aan melena ka tirsaneyn iyo dhaqaale yar.
Xirfad yahanka isku darsaday fikir iyo xirfad wanaagsan, oo ah wiil uu dhalay nin can ahaan jiray ee Abedi ‘Pele’ Ayew waxa uu u muuqdaa inuu helay kaamil ahaanshaha horyaalka ee muddo aan la aaminsaneyn.
“Tani waa xaaladda saxda ah ee aan uga ciyaaraayo Premier league aanna ku rumeynaayo waxaan ku hamminaayay,” sidaas ayuu Ayew u sheegay BBC-da.
“Si wanaagsan Ayaan isu hagaajiyay sababtoo ah waqtihore baan imaaday. Waxaan qati u helay inaan tababarada hordhaca ah dhammaan aan sameeyo, inaan ogaado oo barto ciyaartoyda, waxayna igeliyeen galsooni iyo masuuliyad.
Sida uu uga jawaabay waxa ay tahay in 5 gool uu dhaliy
ay, mid uu caawiyay 10kii ciyaar ee ugu horeeyay ee uu ka dhexmuuqdo ee premier league.
Imaashihiyiisii England waxaa u wehliyay niyad jab uu kala yimi kooxda Marseille oo kaalinta afaraad ku dhameysatay horyaalkii faransiiska ee sanadkii hore, laba horyaalna waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay.
Laakiin Ayew waa bar-dhalaaleysa, markii uu ka soo tagaayay koox uu shucuurtooda kicinaayay oo uu ku biiray asigoo 11 sano jir ah, uuna ola qaaday laba koob, una dhaliyay 61 gool.
Markii uu ka soo tagaayay Velondrome bishii May, Ayew waa uu isku cvelinwaayay oohinta markii taageerayaasha garoonka buuxiyay ay magaciisa ku heesheen.
Maahan markii ugu horeysay oo sanadkan uu garoon dhexdiisa ku ooyo.
Bishii February, waxa uu ka niyad jabay in Ghana ay waysay fursad ay ugu guuleysan kartay koobka qaramada Afrika oo noqon lahaa kii ugu horeeyay ee muddo 33 sano ah ay qaadaan, Ivory Coast ayaana rigoorooyiin koobka ku qaaday.
Ayew wuu dhaliyay gll ku laadkii la siiyay, laakiin mid ka mid ah shanta ciyaaryahan Ayaan dhalin, sidaa darted ayaana looga qaaday.
Laakiin waxaa jiray kulamo muhiim u ahaa sida inay ka badiyeen kooxda Koofur Afrika waxayna ka gudbeen qeybtii isreebreebka ee ciyaaraha.
Ciyaaryahankan ku guuleystay abaalmarintii BBC-da ee 2011kii, ma noqon karaa Aye wee u dhashay Ghan laacibkii ugu horeeyay eel aba jeer abaalmarintan hela.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Rayiga Khuborada – Michael Oti Adjei, BBC Sport, Accra:
Arintaasi lagama doodaayo. Andre Ayew waa ciyaaryahanka ugu caasan ee Ghana, waa mid kamid ah kuwa sanadkan 2015ka ugu wanaagsan waana harka ciyaaryahan kastaa ee Qaaradda, waana taasi sababta uu uga mid yahay liiska ciyaaryahannada ku tartamaya abaalmarinta BBC ee sanadkan.
Marka la eego sida xulka qarankiisa uu ugu tiirsan yahay iyo kooxda Swansea City aysan la’aantii u dhaqaaqi Karin, Ayew waa inuu mar labaad ku guuleystaa abaalmarintan.
Waxa uu ahaa ninka ka muuqday iyadoo xittaa kooxda qarankiisa ay markii shanaad ku guuldareysatay inay koobka qaado.